Tsy ny Linux ihany, fa i Apple sy Microsoft dia naneho fahalianana amin'ny Rust | Avy amin'ny Linux
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha miresaka ny fahalianana nasehon'izy ireo izahay lMpanamboatra kernel Linux momba ny harafesina ary indrindra ny fampiharana azy ao anatin'ny Kernel (azonao atao jereo eto ny publication).
Fa ny Rust dia tsy zavatra Linux intsony, satria toa vao mainka liana amin'ny fampiasana Rust ho an'ny fandaharana ambany ny Apple, satria raha jerentsika ny fepetra takiana mba hidirana ao amin'ny orinasa paoma dia ireto no takiana.
- 3-5 taona niainana niaraka tamin'i C.
- Fanandramana amin'ny Rust faniry ary tombony lehibe.
- Traikefa amin'ny asa miaraka amin'ny tambajotra ambany.
- Fanandramana amin'ireo rafitra miasa toa an'i Unix.
- Fahaiza-manao fifandraisana mazava.
Ary io C aza dia napetraka tamin'ny mpiasa mpandrafitra ny rafitra noho ny antony maro. Tamin'ny fotoana fanontana ny fihaonamben'ny teknolojia Open Source Technology Summit tamin'ny taona 2019, dia nanonona zavatra vitsivitsy toy izao i Josh Triplett:
"Voalohany, amin'ny maha-fiteny nivoatra azy, C dia ahafahan'ny mpamorona mahazo fampiasa sy hamokatra; kely kokoa ny tsipika fehezan-dalàna hanao asa mitovy raha ampitahaina amin'ny assembler. Izy io koa dia haavon'ny fampisehoana akaiky ny an'ny assembler. Ka ny fanovana ho any C dia tsy miteraka fatiantoka arak'izay mety ho zavatra natolotry ny mpanangona. "
Na izany aza, nandritra ny Vovonana Linux Security 2019, mpikaroka fiarovana dia namantatra ny iray amin'ireo lesoka lehibe indrindra manintona ny fiteny C no olana mifandraika amin'ny fitantanana fitadidiana: Mihoatra ny buffer, fizarana tsy voavoaka, fidirana amin'ny faritra fahatsiarovan-tena diso na navoaka, sns.
Araka ny tarehimarika avy amin'ny rakibolana Common Vulnerability and Exposure (CVE), 15,9% amin'ireo fahalemena 2288 20 izay nisy fiatraikany tamin'ny kernel Linux tao anatin'ny XNUMX taona dia mifandraika amin'ny fihoaran'ny rano buffer. Nandritra ny fandefasana azy tao amin'ny Open Source Technology Summit, niverina tamin'ny antsipiriany ity ny injeniera Intel, ary nanampy fa "mila fiteny nivoatra ny mpamorona izay manome valiny amin'ireo olana tsy voavaha ao amin'ny C ary misy fiasa mahaliana sasany. »
Tao anatin'ity toe-javatra ity no nipoiran'ny Rust ary nahatsapa ilay injeniera fa "ny harafesina dia ny ho avin'ny fandrafetana ny rafitra ary i C ilay mpanangona vaovao", maka ny olana manazava ny fomba.
Ny fiarahamonina Linux dia voatery mieritreritra ny fomba fampidirana ny fanampiana Rust.
"Mila mandray ny fomba fanohanana mitovy amin'ny mpanangom-bokatra izahay ary manamarina ny fisian'ny sainam-panangonana isan-karazany eo amin'ny sehatra fandaminana," hoy i Linus Torvalds.
Ny famotsorana ny mpamorona ny kernel open source malaza amin'ny fotokevitra dia manamarika ny fifanarahana nifanaovany tamin'ny fitsipiky ny fanohanana mihombo ho an'ny fiteny Rust ao anatin'ny Linux.
Ho azy Microsoft dia mifindra monina mankany Rust ka manimba ny C / C ++ fa tsy heverin'ny orinasa ho azo ekena intsony ny manamboatra ireo antsoina hoe rindranasa rafitra.
Ary ny antony dia tsotra, satria i Rust dia manome antoka tsara kokoa amin'ny lafiny filaminana an'ny rindrambaiko noho ny mpivady C / C ++.
Noho izany, misy ny fandraisana andraikitra mikendry ny fampiasana bebe kokoa ny fiteny hampitomboina eo amin'ireo mpanonta. Tamin'ity taona ity, ohatra, dia nanambara ny fahatongavan'ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakavian'ireo fitaovana famoahana fiteny i Microsoft izay misy C ++ / WinRT: Rust / WinRT.
Tetikasa fiteny Rust mahazatra tanteraka ho an'ny Windows Runtime API, napetraka ho tranombokona mifototra amin'ny lohateny lohateny ary natao hanomezana anao fidirana kilasy voalohany amin'ny Windows API maoderina.
Windows Runtime (WinRT) no mamorona ny fototra ho an'ny fampiharana Universal Windows Platform (UWP). Izy io dia mifototra amin'ny Component Object Model (COM) API eo ambanin'ny saron-doha ary natao ho azo alefa amin'ny alàlan'ny vinavina amin'ny fiteny.
WinRT dia azo ampiasaina amin'ny zavatra toy ny mpamily, izay mamela ny tenany amin'ny kaody teratany avo lenta. Ny Microsoft dia manohana an'ity tranga fampiasana ity amin'ny C ++ / WinRT. Fa nanomboka ny Alakamisy dia niditra tao amin'ny C ++ tamin'ny Rust / WinRT i Rust. Vaovao tsara ho an'ireo mpamorona Rust.
Izany dia satria ireo vinavina amin'ny fiteny ireo dia mandray ny metadata izay mamaritra ny AP hafaIzaho ary manome fatorana voajanahary ho an'ny teny fandaharana kendrena. Araka ny azonao an-tsaina, izany dia manamora ny fanamboaran'ny mpandraharaha ny rindranasa Windows sy ny singa mampiasa ny fiteny izay safidiny.
Azonao atao ny mampiasa ireo Windows API ireo avy eo hamoronana rindranasa birao, rindranasa fitahirizana, na zavatra hafa tsy manam-paharoa, toy ny singa, serivisy NT, na mpamily fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Tsy ny Linux ihany, fa Apple sy Microsoft dia naneho fahalianana amin'ny Rust.
juliosao dia hoy izy:
Pufff tena tsy tiako tokoa ny sintom-harafesina. Toa mifanohitra tanteraka amiko izany.
Afaka nahazo fiteny hafa miaraka amin'ny tombony azony izy ireo fa C-Style na Python-Style.
Mamaly an'i juliosao
Lluis dia hoy izy:
Ahoana raha toa ka tsy afaka amin'ny fiteny am-bava koa izy ireo? Ho mora sy intuitive be toy izany ny fandefasana azy!
Valiny tamin'i Lluis
OC / C ++ miaraka amina opération harafesina
tsara kokoa ny mampiasa harafesina noho ny java, satria nisy "genius" nanolotra azy ho an'ny rafitra,
Tian'i Shina ny mahita ny TikTok nakatona toy izay ny fivarotana an-tery